Jose Mourinho oo markale baalasha ka tifay Arsene Wenger – Gool FM
Jose Mourinho oo markale baalasha ka tifay Arsene Wenger
Byare September 6, 2017
(England) 06 Sebt 2017. Jose ayaa markale Jiib ku riday Arsene Wenger oo uu hadda ka hor ku sheegay inuu yahay mid ku taqasusay guul darrada.
Iminkana Mourinho ayaa sheegay in Arsenal ay diyaar u tahay inay fashilanto isagoo sabab uga dhigaya waqtiga dheer uu xilka u hayo Wenger.
Sheekada ayaa timid mar uu Jose iska difaacayay wararka ku aadan muddada gaaban uu kooxaha la joogo iyadoo xusid mudan tahay in waqtigii ugu dheeraa uu koox la joogo ay ahayd 3-sano.
“Haddii ay dadku yiraahdaan inaan hadba koox u dhaqaaqo waa saxan yihiin, laakiin ma aaminsani inaan ahay tababare waqti gaaban,” Mourinho ayaa sidaa ku bilaabay wareysi uu siinayay The Times.
“Waxaan kooxaha u diyaariyaa guul. Waxaan aaminsanahay in kooxaha u diyaariyo wado marka aan ka tago uu tababaraha cusub u imaanayo koox heer sare ah, taasina ma ahan waqti gaaban, xitaa haddii aad tagto.
“Haddii aad koox joogto sanad amaba labo sano amaba shaqo kaleba, haddii aad uga tagto qaab dhismeed oo xitaa gaari kara guulo ka badan marka aadan la joogin, taasi maahan waqti gaaban. Taasi waa waqti dheer.
“10 sano amaba 20 sano ayaad xil heyn kartaa, marka aad kooxda ka tagtana waxayba diyaar u tahay fashil.”.
Andres Iniesta oo beeniyay inuu heshiis la gaaray Barcelona
'Waan diiday Arsenal', - Kylian Mbappe